မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိမှ တိုင်းပြည်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိမှ တိုင်းပြည်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိမှ တိုင်းပြည်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်
Posted by phone_kyaw on Mar 19, 2012 in Copy/Paste |6comments
ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ထဲက မီဒီယာတွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ နလံထခါစ လူနာသည်လို ဖြစ်နေရှာတယ်။ လွတ်လပ်ခွင့်မရှိတာအပြင်၊ နည်းပညာ၊ငွေကြေးနဲ့ အတက်ပညာလည်း အားနည်းပါတယ်။ ဂျာနယ်တွေ ပလူပျံနေတာကလွဲလို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ တီဗွီလိုင်းမရှိတာကလည်း တိုင်းပြည်အတွက် အင်မတန်ကို နစ်နာလှတယ်။ သတင်းစာဆိုတဲ့ အရာကလည်း ဘယ်သူမှ အလေးမထားတဲ့သတင်းစာဖြစ်နေရှာတယ်။ ပြည်ပ မီဒီယာဆိုတာကလည်း တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးမေးလို့ ပဲရတယ်။ ဒီဘီဗွီကလည်း ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ရိုက်ပြီး အပျော်တမ်းကစားတဲ့သတင်းသမားလို ဖြစ်နေတယ်။ အားလုံးကို ခြုံကြည့်ပြီး ၊ နိုင်ငံတကာမီဒီယာနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောရရင် အင်မတန်ကို အားနည်းသေးတယ်။ အဓိက ပြသနာက အစိုးရက လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကို ခွင့်မပြုသေးလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလို့နိဂုံးချူပ်ချင်ပါတယ်။ ယနေ့ မှာ အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဘတ်စုံတိုးတက်အောင်ကျိူးစားနေတဲ့ကာလမှာ မီဒီယာကလည်း တဘက်တစ်လမ်းက အစိုးရကို အားပေးကူညီသင့်တယ်။ ဒိ့ထက်ပိုပြီး အားကောင်းအောင်မြင်လာအောင် အားလုံးကို လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသင့်နေပြီ။ အကယ်၍သာ ထပ်ပြီးပိတ်ဆို့ ထားရင် လက်ရှိအပြောင်းအလဲကာလမှာတင်မကဘူး အနာဂတ်အတွက်လည်း ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အတားအဆီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မီဒီယာကို လွတ်လပ်ခွင့်မပေးပဲထားရင် ဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိူးဟာ တနေ့ မှာနစ်နာရလိမ့်မယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှု၊ ရောဂါဘယထူပြောမှု၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု စတဲ့ ဆိုးကျိူးတွေဟာ ဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့ အတူ တပြိုင်တည်း ပြည်သူကို ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်။ ဒါတွေက ချက်ချင်းတော့ ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုဒုက္ခတွေကို တားဆီးကာကွယ်ဖို့ ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ ဆိုတာ လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာမရှိပဲ မရနိုင်ဘူး။ အရည်အချင်းမရှိတဲ့မီဒီယာသမားတွေနဲ့ လည်းမရနိုင်ဘူး။ ဥပမာ ထားဝယ်က ရေနက်စီမံကိန်းနဲ့ မြစ်ဆုံဆည်ရဲ့ ဆိုးကျိူးကို Documentry ရိုက်ပြီး မြန်မာ့အသံမှာ ဘယ်တုန်းက မှမလွှင်ခဲ့ဘူး။ စဉ်းတောင်စဉ်းစားပုံမပေါ်ဘူး။ ဆိုးကျိူးအပြင် ကောင်းကျိူးကိုလည်း တွဲဖက်ရိုက်သင့်တယ်။ ဒီလိုမျိူးအရည်အသွေးမှီမှီနဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီပြနိုင်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။ အခုတော့ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတော့ နောက်ဆုံးတိုင်းပြည်ပဲ နစ်နာရတော့တယ်။ တကယ်လို့ သာ အားလုံးကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်၊ ဘာတွေအားနည်းနေတယ်၊ ဘာတွေတိုးတက်တက်နေတယ်၊ ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်နေလဲဆိုတာကို ပြည်သူတွေအားလုံးကြည့်နိုင်မယ်။ ပြီးရင် လိုအပ်နေတာကို ပြည်သူကလည်း ဝိုင်းပြီး ပံ့ပိုးပေးတာအပြင် ၊ အစိုးရကလည်း ဝိုင်းပြီးကူညီပေးရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲလို့ တွေးနေမိတယ်။ အားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ လုပ်ကြစေချင်လို့ဒီစာကို ရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာက မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကြောင့် ဘယ်တိုင်းပြည်မှ မပျက်စီးခဲ့ပါဘူးလို့ ပြောရင် နိဂုံးချုပ်ချင်ပါတယ်။
Hey Man, you have optimism now !! thumb-up this time. Keep it up!
မြန်မာပြည်မှာ.. မီဒီယာကို.. ထိန်းချုပ်တဲ့ဘယ်ဥပဒေမှမရှိရင်.. ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံစစ်စစ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ..တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့လမ်းပေါ်.. ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းရောက်ပါတယ်လို့…
မီဒီယာ ၁၀၀% လွတ်လပ်ရင်.. အစိုးရရဲ့.. ပြုပြင်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်နေတာကို.. ၁၀၀% ယုံပါမယ်..။
ဒီနေ့ဘဲ သစ်ထူးလွင် ဆိုဒ်ကို မြန်မာပြည် ကဝင်လို့မရအောင် ပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့။